धर्मशास्त्रले यसो भन्छ-कलियुगको समय अब कत्ति बाँकी ? त्यसपछि के हुन्छ ? - हिमगाथान्यूज
Home धर्म दर्शन धर्मशास्त्रले यसो भन्छ-कलियुगको समय अब कत्ति बाँकी ? त्यसपछि के हुन्छ ?
धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् ।हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्य युग चार चरणमा रहेको थियो जसको आयू १७ लाख २८ हजार वर्षको रहेको शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै त्रेता युग २ चरणमा रहेको थियो । जसकोआयु १२ लाख ९६ हजार वर्ष रहेको बताइएको छ ।
तेस्रो युग द्वापर युगका २ चरण रहे जसमा ८ लाख ६४ हजार बर्ष रहेको धार्मिक विश्वास रहेको छ । तर, शास्त्रहरुमा युगहरुको सयम र वर्षबारे फरक फरक व्याख्या गरिएको छ ।
कलियुगको आरम्भ १२ सय दिव्य वर्षको एक कलियुग मानिएको छ । कलियुग चौथो युग हो । शास्त्रहरुका अनुसार महाभारत युद्ध ३१३७ ईसा पूर्वमा भएको थियो । कृष्णको यो युद्धको ३५ वर्षपछि देहान्त भएको थियो, जसपछि कलियुगको आरम्भ भएको विश्वास लिइन्छ ।
Previous articleभाग्यमानी हुनेछन् यी राशीहरु जसले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन्
Next articleइच्छा तपाईंकोः छोरा जन्माउने की छोरी ? यस्तो छ १००% काम गर्ने चाइनिज सुत्र
भाग्यमानी हुनेछन् यी राशीहरु जसले निकै नै धन कमाउँछन् हेर्नुहोस् कतै तपाईको राशी त परेन्